Zefania – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Zefania
1:1 Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Zefania, zanak'i Kosy, ny zanak'i Gedalia, zanak'i Amaria, ny zanak'i Hezekia, tamin'ny andro nanjakan'i Josia, zanak'i Amona, mpanjakan'ny Joda,.
1:2 raha fanangonana, No hanangonako miaraka ny zavatra rehetra tsy ho ambonin'ny tany, hoy Jehovah.
1:3 Izaho hanangona olona sy ny biby fiompy; Izaho hanangona ny zavatra manidina eny amin'ny habakabaka sy ny hazandrano any an-dranomasina. Ary ny ratsy fanahy dia ho loza. Ary dia hampihahaka ny olona eo anatrehan'i ny tany, hoy Jehovah.
1:4 Ary hitarihako ny tanako tamin'ny Joda sy ny mponina rehetra any Jerosalema. Ary dia hampihahaka eo amin'ity tany ity ny sisa amin'i Bala, ary ny anaran 'ny mpitantana miaraka ny mpisorona,
1:5 ary izay mankafy ny fanentanana ara-miaramila eo amin'ny valin-drihana ny lanitra, na ireo izay mankafy sy mianiana ho an'i Jehovah, ary izay mianiana Melchom,
1:6 na izay mivily amin'ny fanarahana ny Tompo, ary ireo izay tsy nitady ny Tompo, na nanontany momba azy.
1:7 Mangina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Fa misy andron'i Jehovah efa akaiky; fa Jehovah efa nanomana niharan-doza, efa nanamasina ireo izy hoe.
1:8 Ary izao no ho: amin'ny andro ny niharam-boina 'ny Tompo, Dia hovaliako ny mpitarika, ary amin 'ny zanaky ny mpanjaka,, ary ireo rehetra izay efa nitafy akanjo hafahafa.
1:9 Ary hovaliako izay rehetra miditra sahisahy mihoatra ny tokonana amin'izany andro izany, ireo izay mameno ny tranon'i Jehovah Andriamaniny amin'ny faharatsiana sy fitaka.
1:10 Ary izao no ho amin'izany andro izany, hoy Jehovah: ny feon 'ny fitarainana avy amin'ny vavahadin-kazandrano dia, sy fidradradradrana ao amin'ny tanàna Faharoa, ary lehibe fanenenana any amin'ny havoana.
1:11 midradradradrà, mponina amin'ny Andry. Ary ny vahoaka rehetra Kanana efa lavo mangina. Dia simba rehetra izay efa mifono volafotsy.
1:12 Ary izao no ho amin'izany andro: No dinihinao tsara amin'ny jiro Jerosalema, ary, indro, hovaliako ny olona izay efa lasa niraikitra tao amin'ny faikany, izay milaza ao am-pony, "Ny Tompo dia tsy hanao soa, ka tsy hanao ratsy. "
1:13 Ary ny heriny ho amin'ny fandrobana, ary ny tranony any an-efitra. Ary hanorina trano sy tsy hitoetra ao aminy, ka tanim-boaloboka, fa tsy hisotro ny divay avy.
1:14 Ny andro lehiben 'ny Tompo efa akaiky; Eny, efa antomotra sady haingam-pandeha indrindra. Ny feon 'ny andron' ny Tompo dia mangidy; ny mahery no hotsapaina any.
1:15 Tamin'io andro io dia andro fahatezerana, Andro fahoriana sy fahantrana ho, ny andro mahory sy ny fahoriana, Andro maizina sy manjombona, andro ny rahona sy ny tadio,
1:16 ny Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny trompetra ny tanàna mimanda sy ny ambony manda.
1:17 Ary Izaho no olana ny olona, ka handeha toy ny jamba, satria izy efa nanota tamin'i Jehovah. Ary ny rany dia haidina toy ny nofon-tany, ary ny vatany toy ny zezika.
1:18 Na ny volafotsiny, na ny volamenany, ho afaka ny hanafaka azy amin'ny andro fahatezeran'ny Jehovah. Ny tany rehetra dia ho levon'ny amin'ny afo ny zotom-pony, fa ny faingana, dia mbola ho entiny ho consummation rehetra mponina amin'ny tany.
2:1 Vorio, famoriana, Ry ny olona tsy mendrika ny ho tia.
2:2 Mandra-didy Nitoetra kaonty, ny andro toy ny vovoka mandalo, talohan'ny izay fahatezeran'ny ny fahatezeran'i Jehovah mba handresy anao, talohan'ny izay ny andro ny fahatezeran 'ny Tompo mba handresy anao.
2:3 Mitadiava ny Tompo, rehetra ianareo mpandefitra rehetra ambonin'ny tany; ianareo izay efa niara-niasa dia ny fitsarana. Katsaho ny olo-marina, mitady ny malemy fanahy. Koa dia, amin'ny fomba, mety ho voafina ianareo amin'ny andro ny fahatezeran'i Jehovah.
2:4 Fa Gaza dia ho ringana, ary Askelona no ho any an-efitra; dia amin'ny mitataovovonana Asdoda namoaka, ary Ekrona Tsy hitsy intsony.
2:5 Loza ho anareo izay honina ny amoron-dranomasina amin'ny ranomasina, ianareo olona ny fahaverezana. Ny tenin 'ny Tompo no ho, Kanana, ny tanin'ny Filistina, ary dia hampihahaka anao, ka tsy misy mponina sisa no ho tavela.
2:6 Ary ny morontsiraka any an-dranomasina, dia ho fialan-tsasatra ho an'ny mpiandry ondry sy ny fefy ho fiandrasana omby aman'ondry tsipika.
2:7 Ary izany dia ho ny andalana 'ilay dia hijanona avy amin'ny taranak'i Joda. Fa any no niandrasan'ny. Ao amin'ny trano ao Askelona, dia hitsahatra mankany amin'ny hariva. Fa Jehovah Andriamaniny no hamangy azy ireo, ary hampiala ny avy amin'ny fahababoany.
2:8 Efa reko ny momba ny fahafaham-baraka Moaba sy ny fitenenan-dratsy ny taranak'i Amona, izay efa tenenina mafy ny olona, ​​ary efa nahalehibe mihoatra noho ny sisintany.
2:9 Noho io, raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, ny Andriamanitry ny Isiraely,, Moaba dia ho tahaka an'i Sodoma, ary ny taranak'i Amona ho tahaka an'i Gomora, tahaka ny dryness ny tsilo, sy ny antontan-sira, ary tani-hay, rehetra ny fomba mandrakizay. Ny sisa amin'ny oloko no manimba azy, ary ny sisa amin'ny oloko no hahalasa azy.
2:10 Izany no hanjo azy ireo noho ny fireharehany, satria niteny ratsy, ary efa nahalehibe ny vahoakan 'ny Tompo, Tompon'ny maro,.
2:11 Ny Tompo no ho eo aminy ny horohoro, ary dia hampihena ny andriamanitry ny tany. Ary dia mankafy azy, samy avy any amin'ny fonenany, ny nosy rehetra 'ny Jentilisa.
2:12 Na izany aza, ianao Etiopiana, dia ho faty ny sabatro.
2:13 Ary izy hanitatra ny tànany eo ambonin'ny Avaratra, ary Izy no handringana Assur. Ary hampitoetra tsara tarehy tany an-efitra, sy amin'ny toerana azo naleha, ary tahaka ny tani-hay.
2:14 Ary ny ondry aman'osy dia handry ao aminy, ny biby any an-jentilisa. Ary ny sama sy ny sokina hijanonjanona eny amin'ny ny tokonam-baravarana; ny feon 'ny hira dia ho vorona am-baravarankely, miaraka amin'ny akoho ambony ny tokonam, fa Izaho no hampihena ny hery.
2:15 Izany no tanàna lehibe, monina ao fahatokiana, izay tao am-pony hoe:, "Izaho, ary tsy misy afa-tsy amiko." Ahoana no efa tonga lair ho an'ny biby any an-efitra? Izay rehetra mandalo azy dia Misitrisitra sy mihifikifi-tànany.
3:1 Loza ho ny provocatrix sy ny voavotra tanàna, izay ny.
3:2 Izy tsy nihaino ny feo, ary tsy efa izy nanaiky fananarana. Efa tsy natoky ny Tompo; dia tsy hanakaiky azy Andriamanitra.
3:3 Ny mpitondra ao aminy dia toy ny liona mierona. Hariva ny mpitsarany amboadia; mamela na inona na inona izy ireo ny maraina.
3:4 Ny mpaminaniny adalana; ny olona tsy manam-pinoana. Ny mpisorona dia nandoto zava-masina; Efa nanao izay tsy ara-drariny izy ireo manohitra ny lalàna.
3:5 Ny Tompo ihany no eo aminy; dia tsy hanao meloka. Amin'ny maraina, amin'ny maraina, dia hitondra ny fanamelohana ho any amin'ny mazava, Ary tsy ho nafenina. Fa ny ratsy fanahy tsy nisy nahalala henatra.
3:6 Efa niparitaka ny firenena, ary ny tilikambo efa rovitra teo. Izaho no nanao ny fomba efitra, mandra-nisy izay tsy nandeha namaky. Ny tanànany ho lao dia, tsy misy olona sisa, na mponina.
3:7 Hoy aho hoe: Na dia izany aza, dia hatahotra ahy; dia raiso ny anatra. Ary ny fonenana dia tsy ho faty, na dia eo aza ny zavatra rehetra momba izay efa nitsidika azy. Na izany aza tena, dia nitsangana tamin'ny vao mangiran-dratsy, ary nanimba ny heviny rehetra dia.
3:8 Noho io, manantena aho, hoy Jehovah, amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty amin'ny ho avy, fa ny fitsarana dia ny hanangona ny Jentilisa, ary hanangona ny fanjakana, sy hanidina azy ny fahatezerany, rehetra, ny fahatezerana ny fahatezerako. Fa ny afon'ny zotom-po, ny tany manontolo dia ho lanin'ny.
3:9 Fa amin'izany dia hampodiko ho any amin'ny olona voafidy molotra, ka mba mangataka rehetra ny anaran 'ny Tompo sy hanompo Azy amin'ny firaisan-sorony.
3:10 Avy any an-dafin'ny onin'i Etiopia, ny supplicants, ny zanaky ny am-pielezana, dia hitondra fanomezana ho ahy.
3:11 Amin'izany andro izany, dia tsy ho menatra noho ny famoronana rehetra, araka izay efa niodina tamiko. Ka dia hesoriko tsy ho eo aminao ny mpirehareha mpandoka tena, ary dia tsy hisandratra eo an-tendrombohitro masina.
3:12 Ary Izaho ho lovan'izay teo aminao Izy mahantra sy malahelo ny olona, ary dia manantena amin 'ny anaran' ny Tompo.
3:13 Ny sisa amin'ny Isiraely dia tsy hanao meloka, na handainga, ary ny lela mamitaka dia tsy ho hita eo am-bavany. Fa izy ireo no ahi-maitso sy ho nipetraka teny, ary tsy hisy olona hamely azy amin'ny tahotra.
3:14 Miderà, Ziona zanakavavy. Manakorà amim-pifaliana, Isiraely. Mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra, Jerosalema zanakavavy.
3:15 Ny Tompo efa nanaisotra ny fitsarana; efa nivily ny fahavalony. Ary ny mpanjakan'ny Isiraely, ny Tompo, dia eo aminareo; dia tsy hatahotra ny loza intsony.
3:16 Amin'izany andro izany, izany dia holazaina amin'i Jerosalema, "Aza matahotra,"Sy ny Ziona, "Aza malahelo ny tanana ho malemy."
3:17 Ny Tompo Andriamanitrao no hery eo aminareo; Izy no hamonjy. Hiravoravo anao amin'ny fifaliana. Noho ny fitiavany, dia mangina. Hiravoravo anao amin'ny fiderana.
3:18 Ny triflers izay niala ny lalàna, Izaho dia hanangona, satria izy ireo avy aminao, mba tsy hijaly intsony noho fahafaham-baraka azy.
3:19 Indro, Hotanterahiko ny rehetra izay nampahory anareo amin'izany andro, ary Izaho no hamonjy ireo izay mandringa, ka hangoniko miaraka izy izay efa nandroaka. Fa hametraka azy ireo ho fiderana sy ho laza, any amin'ny tany rehetra izay efa menatra,
3:20 amin'izany andro, rehefa hitarika ho anao, ary amin'ny fotoana no hanangonako anao. Fa Izaho no hatolotray ho eo an laza sy ho fiderana, any amin'ny firenena rehetra eto an-tany, rehefa ho efa niova fo ny fahababoana eo imasonareo, hoy Jehovah.